बहस - नारी
‘लाइफ्स अल्टिमेट डेस्टिनेसन इन ह्याप्पिनेस– अल्जेरियाका फिक्सन फिलोसफर अल्बर्ट कामसले भनेझैं पैसा, प्रतिष्ठा, पावर, पोजिसन प्राप्त गर्न चाहनेहरूको पनि यी चीजमा अन्तिम गन्तव्य खुसी नै हो । दौडधूप, कडा परिश्रम, सीप र क्षमता अनि समय खर्च गर्ने पनि खुसी प्राप्तिकै लागि हो । सक्ता, शिक्षा, सशत्तीकरण, समतामूलक समाज अनि सचेतनापछि अहिले संसार खुसी प्राप्तिको बाटोतर्फ ढल्किएको छ । अहिले कुन देशका नागरिक कति खुसी ? भन्ने कुराले उक्त मुलुकको विकासलाई मापन गर्ने ट्रेन्डको विकाससमेत भैसकेको छ । जीवन खुसी भए नै सार्थक मानिने हो भन्नेहरूको संख्या बढ्दैछ । मानिसलाई खुसी हुन के कुरा आवश्यक छ त ? दीपा गौतम, फेसन डिजाइनरसकारात्मक सोच, कामप्रतिको जिम्मेवारी अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा परिवारलाई गुणस्तरीय समय छुट्याउन सकियो भने दुःखी हुनुपर्दैन । स–साना कुराबाट विचलित नहुने, गल्ती र कहिलेकाहीँको असफलतामा नआत्तिई त्यसलाई पाठका रूपमा लिएर अघि बढ्दै जाने हो भने खुसी मिल्छ । जीवन भनेको सुख–दुःखको संगम हो । जीवनमा सजिला–अप्ठ्यारा त आइहाल्छन् । यस्तो बेला पनि आफूलाई शान्त राख्दै चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्ने हो भने खुसी पहिल्याउन सकिन्छ । लोभ, मोह, ईर्ष्या, मपाईं र म मात्र खुसी रहुँ भन्ने नकारात्मक सोच र व्यवहारले जीवन कहिल्यै खुसी र सार्थक हुँदैन । यी चीजले त जीवनमा अझ बढी दुःख निम्त्याउँछन् । सुजिना लामा, शिक्षिकामेरो सन्दर्भमा खुशी भन्नु नै आफु बांचिरहेकी छु भन्ने महसुस गर्नु हो । त्यो महसुस तब हुन्छ जब म आफु सहयोगी हुनुका साथै आफु उपयोगी भएको ठान्छु । मानिससंग धन, सम्पत्ती, अत्याधुनिक महंगा भौतिक साधन भएर मात्रै खुशी भइन्छ भन्नु मिथक लाग्छ मलाई । वरिपरिका ब्यक्तिहरूका अगाडी आफु महत्वपुर्ण भएको महसुस गर्नु नै मेरो लागी जीवनको खुशी हो । यसका अलावा आफुले चाहेको वा ईच्छ्याइएको काम सफल हुंदा म जस्तै हरेकलाई खुशी लाग्न सक्छ ।प्रतिमा राई, लेखिका तथा अध्यक्ष विमेन्स एरा एन्ड मिडिया ग्रुप नेपालजीवनमा कतिपय कुरा आफूले सोचे र चाहेजस्तो ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छ । वास्तवमा दुःखी र अशान्त हुनुपर्ने कारण त्यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ । अनुकूल समय र परिस्थितिमा यसै पनि खुसी भइन्छ । प्रतिकूल र विकट परिस्थितिमा पनि आफूले आफैलाई सम्हाल्ने, सम्झाउने र धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता र सीप भए जीवनलाई खुसी र सार्थक बनाउन सकिन्छ । सुखी व्यक्ति विशेषको रुचि, स्वभाव र भावनासँग निकट र निर्भर हुने भएकाले खुसीको परिभाषा फरक–फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ मात्र खुसी हुनु र जीवनलाई सधैभरि खुसी राख्न सक्नु अलग कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ मात्र खुसी हुनु भनेको अवसरको कुरा हो भने सधैभरि खुसी रहन सक्नु जीवन जिउने कला हो । रोग, ईर्ष्या, घमण्ड, शंका, स्वार्थीभावना र लालचीपन खुसीका शत्रु हुन् । जीवनभर खुसीपूर्वक बाँच्न चाहने हो भने यी कुराहरूबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । खुसी न खोजेर पाइन्छ न किनेर । बरु जति धेरै निःस्वार्थ, सहयोगी र सकारात्मक व्यवहारले अरूलाई खुसी पार्न सकिन्छ जीवनमा त्यति नै खुसी मिल्दै जान्छ । अर्को कुरा भौतिक खुसी क्षणिक हुन्छ भने आत्मिक खुसी दीर्घकालीन । जुन खुसी, सद्व्यवहार र सत्कर्मबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । स्वस्थ, सुन्दर र सुखी जीवनका लागि खुसी हुनु शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूपले पनि आवश्यक छ । कतिसम्म भने खुसीबिनाको भौतिक सुविधा पनि नुनबिनाको तरकारीजस्तै खल्लो हुन्छ । त्यसको खासै अर्थ हुँदैन र खुसीबिनाको जीवन सार्थक होला भन्ने परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो अमूल्य मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन खुसी हुनुपर्छ । खासगरी व्यक्तिगत स्वार्थ र नकारात्मक विचारलाई त्यागेर अरूको समेत भलो चिताई सत्कर्म गरे जीवनलाई खुसी र सार्थक बनाउन सकिन्छ । मोहिनी प्रधान, बैंकर्सधैर्य, समझदारी र अरूबाट कुनै अपेक्षा नराखी लगनशील भएर काम गर्दा जीवनमा पछुताउनु पर्दैन अर्थात् दुःखी हुनु पर्दैन । पैसा जिउनका लागि महत्वपूर्ण साधन हो तर खुसीको माध्यम भने होइन । प्रेम नै खुसीको स्रोत हो । जुनसुकै सम्बन्धमा प्रेम रहेन भने त्यो सम्बन्ध निरन्तर रहँदैन । आन्तरिक सन्तुष्टि आवश्यक हुन्छ खुसी हुनका लागि । माया, प्रेम, सम्मान तथा आपसी समझदारीले ‘इटरनल स्याटिस्फ्याक्सन’ दिन्छ । जीवनलाई खुसी राख्ने हो भने रिस, द्वेष, ईर्ष्या तथा आवेगबाट टाढा रहने प्रयास गर्नुपर्छ । मानिसले जीवनमा जे–जति काम गर्छ खुसी हुनकै लागि गर्छ । आखिर जीवनको अन्तिम लक्ष्य त खुसी मात्र रहेछ तसर्थ सकारात्मक सोच तथा सहयोगी भावना राखेर असल कर्म गर्न सके जीवन खुसी र सार्थक हुन्छ । रिना शाक्य, सौन्दर्यविद्मेरो खुसी परिवार र मेरा आफन्तहरूमा छ । खुसी भन्ने कुरा व्यक्ति विशेषमा पनि निर्भर रहन्छ । सबैको खुसी हुने तरिका एउटै नहोला तर केही त्यस्ता काम–कुरा छन् जसले हरेकमा खुसी भर्न सक्छन् र जीवनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सहयोगी हुन्छन् । मुख्य कुरा त आफ्ना लागि मात्र नभई अरुलाई पनि आफ्नो सत्कर्मद्वारा रमाउन सक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले सन्तुष्टि दिन्छ र मानिसलाई खुसी बनाउँछ । मेरो पेसाले अहिलेसम्म हजारौंलाई सुन्दर बनाएर खुसी दिएको छ । चायाँ–पोतोले भरिएर आएकाहरू केही समयको उपचारपछि अनुहार चम्किलो बनाउँदै हाँसेको देख्दा मलाई भित्रैदेखि सन्तुष्टि मिल्छ, न कि त्यसवापत पैसा लिँदा पैसा त जीवन चलाउनका लागि आवश्यक एउटा तत्व मात्र हो जसले खुसी किन्न सकिँदैन । त्यसैले दिनुमै खुसी छ भन्ने मेरो ठम्म्याइ छ । बिनु खड्का, सञ्चारकर्मीमाया, प्रेम, परिवार, साथीभाइ, ईष्टमित्र मेरा खुसीका स्रोत हुन् । पैसाले कहिल्यै खुसी बनाएन मलाई । पैसा नहुँदा पनि म दुःखी भइन । जीवनलाई सार्थक बनाउने भनेको कर्म रहेछ । एउटा शिक्षकले महिनाको अन्तिममा तलब लिन्छ त्यो ठूलो कुरा होइन र त्यो खुसीको स्रोत पनि होइन । उसले असक्षम बालबालिकालाई कसरी सक्षम बनाउँछ त्यो ठूलो उपलब्धि हो, खुसीको स्रोत हो । सञ्चारकर्मीका हैसियतले म जतिलाई प्रेरित गर्न सक्छु त्यसले मेरो जीवनलाई त्यति नै सार्थक बनाउँछ । तराई मूलकी मेरीे एउटी श्रोता बहिनी जसले लामो समयदेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहनुभएको थियो उहाँले मेरो कार्यक्रम सुनेर औषधि छोड्नुभयो, उहाँका अनुसार मेरो काउन्सिलिङले नै उहाँ स्वस्थ हुनुभयो । हो यही नै हो मेरो जीवनको उपलब्धि र खुसी । मेरा कार्यक्रममा आउने पाहुनाहरूले मलाई हरक्षण मोटिभेट गरिरहेका हुन्छन् त्यसले मलाई खुसी मिल्छ । जीवनलाई खुसी र सार्थक बनाउन सबैभन्दा पहिले आफूले के गर्नुभएको छ त्यसमा अडिग रहनुहोस् । आफ्नो कर्मद्वारा अरूमा खुसी खोज्नुहोस्, महिलाका नाताले घर र व्यवसायलाई कसरी सन्तुलित राख्ने त्यसतर्फ पनि सोच्न सकियो भने परिवारमा खुसी छाउँछ । आफू मात्र खुसी हुनतिर लागियो भने क्षणिकका लागि सुख प्राप्त होला तर कालान्तरमा आफूप्रति अरूको मूल्यांकन र दृष्टिकोणले आफैंलाई खान्छ अनि दुःखका दिन सुरु हुन्छन् ।
जथाभावी रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू अझ भनौं महिलाहरूको तस्बिरलाई नकारात्मक तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्नुलाई ट्रोल भनिन्छ । सामाजिक सञ्जालको बिस्तारसँगै यसको प्रयोग विशेष रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू, राजनीतिज्ञ, सिनेकर्मी तथा महिलाहरूमा गरिएको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा एकछिन रमाइलो लाग्ने ट्रोल अब क्रमशः एउटा सामाजिक अपराध बन्दै गएको छ ।
नारी संवाददाता , चैत्र २२, २०७५
प्रेमलाई हेर्ने दृष्टिकोण
उहिले प्लेटोनिक प्रेममा विश्वास गरिन्थ्यो, जहाँ आत्मीय प्रेम र सम्मान हुन्थ्यो, देखादेखमै सारा भावहरू साटिन्थे, भावनाहरू बुझिन्थे । जुग बित्दै जाँदा स्वतन्त्र र खुल्ला प्रेमले स्थान लिँदै गयो । अहिलेको प्रेम सम्बन्ध अस्थायी र ज्यादातर मनोरञ्जनका साथै लाभ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने हुँदा उहिले जस्तो पवित्र तथा दीर्घजीवी प्रेमको अभाव खट्किँदै गएको विभिन्न शोधले देखाउँछन् ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, फाल्गुन १९, २०७५
सम्बन्धमा अविश्वास किन ?
तँ भन्दा म के कम भन्ने अहंले गर्दा सम्झौतामा आउन नसक्दा सम्बन्धमा वैमनस्यता बढ्दै गएको छ । एक–अर्कामा विश्वासको कमी देखिन्छ । हामी अरूलाई विश्वासले भन्दा शंकाको नजरले हेर्छौं । परिवारमा एक–अर्कामाथि अविश्वास गर्नेबित्तिकै सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नु नौलो कुरा होइन ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, माघ ८, २०७५
स्वदेशमै उत्साहित युवा
मानिसले खोजिरहेको कुरा यहीँ दिऊँ भन्ने चाहनाका कारण अहिले थुप्रै युवा विदेश जान छोडेर आफ्नै उद्यममा लागेका छन् । नयाँ अवधारणा भित्र्याउँदै मुलुक बनाऊँ भन्ने अभियानमा दृढ छन् जुन पछिल्लो समयको अत्यन्त सकारात्मक उपलब्धि हो ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, पुस १३, २०७५
द्वन्द्वकालको मध्यमा त दैनिक ३ हजार युवा बिदेसिइरहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । जब विदेशी शिक्षा हासिल गरेपछि नेपाल फर्किएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने युवाहरू देखिन थाले तब उनीहरूका सफलताका कथा र विदेशमा गरेको संघर्ष सुनेर, पढेर, थाहा पाएर सजग हुने युवाहरू स्वदेशमै पसिना बगाऔं–आफ्नै देश निर्माण गरौं भन्ने अभियानमा जुट्न थाले ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, पुस १२, २०७५
प्रदूषणले स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा पार्ने असर
मानिसको शरीरमा लाग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोगको कारण बाहिरी वातावरण एवं प्रदूषण हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन । प्रदूषणका कारण छालाको संक्रमण मात्र बढ्छ भन्ने लागे पनि यसले शरीरको भित्री भागमा समेत असर पुर्‍याउँछ ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, मंसिर १९, २०७५
महिला कसरी सुरक्षित रहने ?
मुलुकमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा देखिन्छन् । दिनहुँजसो बाहिरिइरहेका बलात्कार तथा एसिड प्रहारका घटनाले समाज कतातिर धकेलिँदैछ आँकलन गर्न हम्मे–हम्मे परिरहेको अवस्था त छ साथै अब छोरीचेलीले समाजमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, कार्तिक २५, २०७५
चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा हरेक जात–जाति, उमेर, समूह, पेसा वा व्यवसायका मानिसलाई यसको चटारोले छोप्छ । हाम्रा मौलिक चाड हरेकका लागि संस्कार, खुसी साट्ने मौका अनि सुस्ताउने समय भएका छन् अहिले ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, आश्विन २१, २०७५
परिमार्जित र विकसित तीजका लागि के–कस्ता कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ला ?
निराहार व्रतलाई म ठीक मान्दिन । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै हानिकरक छ । सुत्केरी आमा, ग्यास्ट्रिकका बिरामी तथा गर्भवतीहरूलाई यसले बढी असर गरिरहेको हुन्छ । परिवर्तन आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । दूध, फलफूल तथा प्रशस्त पानी पिएर व्रत बस्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक विषय उठेकाले अब श्रीमतीले श्रीमान्का लागि मात्र होइन श्रीमान्ले पनि श्रीमतीका लागि व्रत बस्नुपर्छ ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, भाद्र २६, २०७५
महिलामैत्री बन्दै वित्तीय क्षेत्र
वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता मात्र होइन महिलाका लागि सेवा–सुविधा पनि थपिँदै गएका छन् । महिला लक्षित विविध स्किम, योजना तथा सेवा नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा बढिरहेको पाइन्छ । नेपालमा संचालित सरकारी तथा निजी बैंकलगायत विभिन्न वित्तीय संघ–संस्थाहरूले फरक–फरक नाममा सुलभ बचत र राम्रो ब्याजदरमा नारी बचत खातामार्फत पनि यो क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, श्रावण १०, २०७५